Looper (2012) မြန်မာစာတမ်းထိုး – Gold Channel Movies
Video Sources 8937 Views
Looper (2012) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Hunted By Your Future, Haunted By Your PastSep. 26, 2012United States, China118 Min.R
အချိန်​ခရီးသွားတာက ​နောက်​အနာဂတ်​မှာ ဖြစ်​လာနိုင်​​တော့မယ့်​အရာတစ်​ခုပါ…ဒါ​ပေမယ့်​ တရားမဝင်​ဖြစ်​လိမ့်​မယ်​…ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး ဒုစရိုက်​အဖွဲ့အစည်း​တွေကဒါကိုအသုံးပြုကြမယ်​…
ဒီ​နေရာမှာ လူတစ်​​ယောက်​ကို သတ်​ချင်​တဲ့ အခါ looperလို့​ခေါ်တဲ့ assassin ​တွေကို သူတို့ငှါးကြတယ်​…
အနာဂတ်​က ဒုစရိုက်​​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေဟာ လူတစ်​​ယောက်​ကိုရှင်းပစ်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​ အဲ့ဒီ့လူကိုလက်​ပြန်​ကြိုးတုပ်​ မျက်​နှာကို ဖုံးပြီး အတိတ်​ကာလဆီကို အချိန်​ယန္နရားနဲ့ ပို့လိုက်​ပါတယ်​..ဒီမှာ အတိတ်​ကာလမှာရှိ​နေတဲ့ looper​ကသူ့ကိုရှင်းပစ်​လိုက်​တဲ့အခါ လူတစ်​​ယောက်​​သေတဲ့ မှတ်​တမ်းမှတ်​ရာဘာဆိုဘာမှမကျန်​ခဲ့ပါဘူး
ဘာလို့လဲဆို​တော့ သား​ကောင်​က အနာဂတ်​ကလာတာမို့လို့ပါပဲ…
Looper​တွေမှာ သာမာန်​လူ​တွေလိုပဲ အနာဂတ်​ပုံရိပ်​ဆိုတာရှိပါတယ်​…looper​တွေရဲ့ အနာဂတ်​ပုံရိပ်​ကို အတိတ်​ကိုပြန်​လွှတ်​ပြီး သတ်​ပစ်​လိုက်​တဲ့အခါ ဒါကို closing the loop သံသရာစက်​ကွင်းကို ပိတ်​ခြင်း…သို့မဟုတ်​……အလုပ်​စာချုပ်​ကိုဖျက်​သိမ်းခြင်းလို့​ခေါ်ပါတယ်​
ဒါ​ပေမယ့်​ Looperတစ်​​ယောက်​က သူ့ရဲ့ loopကို ပိတ်​ဖို့အတွက်​ သူ့ရဲ့အနာဂတ်​ပုံရိပ်​ကို သတ်​ပစ်​ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ​ အဲ့ဒီ့အနာဂတ်​ပုံရိပ်​က မ​သေဘဲ လွတ်​​မြောက်​သွားတဲ့အချိန်​မှာ​​တော့ အချိန်​ခရီးသွားတဲ့​နေရာမှာ ဘယ်​လို time slip​တွေဖြစ်​သွားမလဲ ဘယ်​လိုပြဿနာ​တွေတက်​လာမလဲဆိုတာ ကြည့်​ရှုရမှာဖြစ်​ပါတယ်​….
Imdb rating က​တော့ 7.4အထိရထားတဲ့ ကား​ကောင်းတစ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​
Reviewed and translated by Soulsubs team
Size 1GB/250 MB
IMDb Rating 7.4 482,741 votes
Download Google drive(SD) မြန်မာ 250 MB
Download Google drive(HD) မြန်မာ 1 GB
Download Openload (SD) မြန်မာ 250 MB
Download Openload (HD) မြန်မာ 1 GB
One Piece special episode of skypiea
I Still See You (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Outlawed (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
The Legend of Dugu (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး